PA009 - OMG Personal Shrill Mkpu nkata Keychain SOS Mkpuchi onwe Onwe Nche Ala Mkpu Ala Ntanetị | Ngwọta OMG
PA009 - OMG Personal Shrill Mkpu nkata Keychain SOS Mkpuchi onwe Onwe Nchedo Nchedo Onweghi Nsogbu
★ 120DB-130DB EXTREMELY LOUD, ndị mmadụ nwere ike ịdọrọ uche ọbụna n'ebe dị anya site na 100-150 mita. Nanị ịdọrọ pin ahụ, mkpu mkpu ntị a ga-arụ ọrụ maka 40-60mins nke ụda na-aga n'ihu ma ụda ga-eji nwayọọ nwayọọ na-ada ụda
★ LED FLASHLIGHT - Pịa bọtịnụ iji mee ka ìhè ahụ dị, obere oghere ọkụ ọkụ ahụ bụ maka ìhè ọkụ n'oge na-adịghị anya, ọ na-enye nnukwu aka mgbe ị nọ n'ọchịchịrị, dịka ịchọta isi onu ma ọ bụ chọta oche gị na ihe ngosi ahụ
★ MGBE AHỤ - Ọdịdị na-adịghị mma na Triangle na-eme ka usoro mkpuchi a ghara ịdị mfe ịcha. Igwechi igodo mkpuchi onwe a bụ obere na obere, enwere ike itinye ya na igodo, Akpa, akpaa azụ, akpa, belt, leach, wdg. Ọ gaghị adọta uche nke ndị mmegide ma ọ bụ ndị omempụ
★ FIT FOR - Students, Jogger, Elderly, Kids, Women, Ọrụ abalị. Ọ bụkwa nchebe dị mkpa maka njem, ịga ije, ịma ụlọikwuu ma na-eje ije nkịta. Onyinye onyinye maka ezinụlọ gị na ndị enyi gị
Dị ka anyị si mara, ma ị bi n'ógbè dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị, nchekwa na ọnọdụ mberede nwere ike ime ma ọ bụrụ na anyị echeghị ha.
Oge ụfọdụ, nnukwu mkpuchi mkpuchi nwere ike inwe nnukwu ihe na ọnọdụ ọnọdụ mberede
1. A na-anụ olu Loud Siren ruo 130 DB ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100-150 mita. Ọ bụ ụzọ dị ukwuu igbochi onye ọ bụla na-awakpo, ma n'otu oge ahụ na-akpọ maka enyemaka.
2. Obere obere ọkụ ọkụ, nke nwere ike inyere gị aka ịchọta igodo ma ọ bụ obere ihe n'abalị, nke dị ezigbo mma.
3. Ekele maka ọnụma kọmpat. Nke a na-akọwacha ihe ntanetị a dị ala na akpa aka gị, belt ma ọ bụ akpa akwụkwọ dị ka ihe ịchọ mma. O nwekwara ike inyere gị aka mgbe ị nọ n'ihe ize ndụ.
4. Ewubere usoro mgbasa ozi nke onwe anyị ka ị bịa na ebe ọ bụla ị chọrọ ya.
Oti mkpu olu: 120DB-130DB
ihe: Ewu gburugburu ebe obibi
Onu ahia: (Ogologo Ogologo Ogologo) 2.3 * 2.2 * 0.9 inch
Nha ịbụ: 1.3 oz
1. Olu ụda olu dara ụda, biko etinyela ntị gị, anaghị ewere ya dị ka ihe egwuregwu maka ụmụ gị.
2. Oti mkpu a ga-agbanyeghachi. Mgbe ụda ahụ dị ntakịrị, biko wepu kpochapụ site na mkpuchi azụ ma dochie batrị ọhụrụ 4pcs LR44.
Nzuzo 5907 13 Echiche Taa
PA001 - OMG Mkpuchi Keychain Shrill Mkpu
PA006 - Nchekwala Onye Ọgbụgba Mgbapụ Ọhụma Onye Ọhụma…
PA004 - OMG 130 Db Personal shrill mkpu, Mini Bee…
PA002 - Mgbapụta Shrill Mgbapụta Onwe Mberede OMG
PA007 - Olarm Shrill Mkpu nke Onye Ọkachamara maka…
PA03 - OMG 120dB Grenade ụda, Ọnọdụ mberede…